DARAASAD: Dadka Khuuriya Oo Halis Ugu Jira In Wadne Xanuun Ku Dhaco - Daryeel Magazine
DARAASAD: Dadka Khuuriya Oo Halis Ugu Jira In Wadne Xanuun Ku Dhaco
Cilmi-badhayaal u dhashay dalka Maraykanka, ayaa shaaciyey in qofka hurdada ku khuuriya qaadista cudurka wadna-xannuunka uga halis badan yahay ruuxa laasimay cabbista sigaarka iyo dadka aadka u buurbuuran.
Khubaradani waxay sheegeen in khuuradu keento qarada dhuumaha xididda dhiigga qaada ee Arteries-ka oo weynaada, taasina sababto waxa loo yaqaan haemorrhages (xaalad xididdada dhiigga qaada uu dhiig dibadda uga fakado), kadibna dhiiggaasi dhaliyo in qaybo ka mid ah maskaxda iyo wadnuhu shaqada joojiyaan amma uu qofka asiibo cudurka waax-qallalka.
Waxa kaloo cilmi-baadhistu sheegtay in rubuc ka mid ah haweenka ku dhaqan Ingiriiska iyo tobankii afar ragga dalkaas ku nool ay khuuriyaan, iyadoo intaa ku dartay in caadi ahaan dadka kala badh lagu arko khuurada, waxaanay tilmaameen saynisyahannadu in khuurado xambaarsan tahay halis caafimaad-darro oo weyn.
Khubarada diyaariyey daraasaddan oo ka tirsan Jaamacadda Detroit ee dalka Maraykanka, ayaa helay n khuurada joogtada ah adkayso gidaarrada dhuumaha dhiigga qaada ee artery-ga, kuwaasoo maskaxda gaadhsiiya dhiigga hawada Oxygen-ta leh.
Daraasadayadu waxay caddayn u heshay in khuuradu si cad u waxyeellayso caafimaadka. Si aanad haddaba adigu isu waxyeelalyn amma aanad dhib u gaadhsiin dadka kula wadaaga goobaha hurdada sida ugu dhaqsaha badan dhakhtar u doono.” Sidaa waxa yidhi Dr. Rober Deeb oo ka socday Cusbitaalka Henry Ford Hospital oo ku yaal magaalada Detroit, daraasaddanna hoggaaminayey.
Sidoo kale, Dr. Deeb waxa uu sheegay inay haatan wadaan cilmi-baadhis ay ku raadinayaa samaynta daawo lagaga hortegi karo khataraha caafimaad ee ku lammaan khuurada.
Cilmi-baadhistan oo ay lagu baadhay 1,500 qof waxa lagu ogaaday inay khuuradu 4.8% jeer masuul ka tahay dhimashada dadka adduunka.
10 Arrimood Oo Sababa Wadne Xanuun Faaidada Beytaraafku U Leeyahay Dadka Qaba Dhiig-karka Iyo Wadne Xanuunka Cuntooyinka Ka Hortagga Wadne Qabadka Sida Aadka Ahna U Nadiifiya Xididdada Wadnaha Maxaa Ka Jira In Shaaha Bigayska Ahi Adkeeyo Lafaha Jidhka? (DARAASAD)
Noocyo Cuntada Ka Mid Ah Oo Ragga U Wanaagsan
In kasta oo si guud cuntooyinka waxtarka caafimaad leh ay u siman yihiin ragga iyo …